नेपाली पुरूषसँग बिहे भएर आउने विदेशीलाई ७ वर्षमै नागरिकता दिने कि नदिने ?::Independent News Portal from Nepal.
काठमाडौ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दलहरुले अडान नछाडेपछि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै दलगत अडान राखेपछि शनिबार टुंगो लगाउने भनिएको नागरिकता विधेयक अगाडि नबढेको हो।
नागरिकता विधेयकमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन समितिमा आवाज उठेपछि निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको छ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतले यस विधेयकमा सबैको पार्टीगत सहमति हुनुपर्ने मत राखेका थिए।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन नसकेको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषय नै हो।
प्रकाशित मिति : आइतवार, भदौ २९, २०७६ , १२:५६ बजे
भारतसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द गराैँ : नेकपा सांसद, बन्द गर्नु हुँदैन : कांग्रेस सांसद
उपनिर्वाचनका लागि नामावली सम्बन्धी दाबी विरोध असोज १ गतेदेखि
काङ्ग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान शुरु
नेपाल-चीनबीच ३ सम्झौता